Ngwa ọfịs Google na-enweta mmanya nchọta ọhụụ | Gam akporosis
Akwụkwọ Google na - enweta akara ngosi ‘Akwụkwọ’ ọhụrụ na ebe nchọta ọhụụ
Obere ihe omuma na-aghọ ihe na-atọ ụtọ na Google Docs nke ahụ na-enye anyị ohere ịmara n’oge niile ma ọ bụrụ na echekwara akwụkwọ anyị degharịrị ma ọ bụ ọ dị mkpa ị mekọrịta.
Anyị ga-ekwu na nke mbụ ọhụụ na-ezo aka na desktọọpụ version nke Google Akwụkwọ, ma n'ihi na anyị gam akporo ngwaọrụ anyị nwere ihe ọzọ pere mpe, nke ahụ bụkwa mpaghara nchọta ọhụụ.
Anyị na-amalite na nke abụọ na nke ahụ bụ ihe masịrị anyị. Ha na-anabatakwa site na Spreadsheets na Ihe ngosi. Ihe nyocha ọhụụ ma ọ bụ ubi ọhụrụ a na-anọchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu akara Google nke anyị hụla na nsụgharị ndị gara aga.
Ihe kachasị adọrọ mmasị na nke a nyocha ọhụụ ọhụrụ bụ na ọ na-enye anyị akara ngosi akaụntụ nke anyị ji arụ ọrụ ugbu a. Yabụ, ọ ga-enye anyị ohere ịgbanwe n'etiti akụkọ ngwa ngwa; Anyị nwedịrị ike ịsị na iji mmegharị aka ị ga-agbanye na akaụntụ ọzọ.
Iji nwee ike ịnweta ọhụụ a anyị gafere Google Play ma melite ngwa atọ ahụ. Banyere Google Documents desktọọpụ version, ọ bụ ihe ngosi ntanetị nke ọnọdụ netwọk na mmekọrịta nke akwụkwọ anyị na-edezi. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-ama nke ọma ma ọ bụrụ na akwụkwọ ahụ edezirịrị adịworị n'igwe ojii ma anyị nwere ike ịga n'ihu na ihe ọzọ.
El ndabara ọnọdụ bụ akara ngosi na-egosi na ihe niile zuru oke ma mekọrịta. Ozugbo anyị malitere idezi akwụkwọ ahụ, ọ na-aga na akara ngosi na-egosi "ịchekwaa ...". Ọ na - ahapụ anyị ka anyị pịa ya iji gwa anyị ma ọ bụrụ na dọkụmentị a dị na ntanetị.
azụ obere ozi maka ngwa Google office na android na obere nkọwa nke ọnọdụ ịchekwa akwụkwọ. Obere nkọwa iji gbakwunye ahụmahụ nke imepụta ọhụrụ nke ngwa atọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Akwụkwọ Google na - enweta akara ngosi ‘Akwụkwọ’ ọhụrụ na ebe nchọta ọhụụ
Ozi Google ga - egosiputa ihe ezoro ezo na njedebe maka izipu ozi RCS
Realme X3 SuperZoom webatara: pịnye 120 Hz na igwefoto iji jide kpakpando